बालबालिका सुतेको कोठामा सेक्स गर्दा हुन्छ यस्तो जोखिम ! - Experience Best News from Nepal
डा. दिनेश बाँस्तोला पश्चिमा समाजमा प्रायः बालबालिकालाई सँगै सुताउने प्रचलन छैन । नाबालकै उमेरमा पनि उनीहरुलाई अलग्गै सुताउने प्रचलन देखिन्छ । तर नेपाल, भारतलगायतका पूर्वीय समाजमा भने बाल–बालिकाको निश्चित उमेर नपुगेसम्म बाबु–आमासँगै सुताउने प्रचलन छ ।